SEAgames – Gaming Noodle
Video Game ဆိုတာ အားကစားနည်း တစ်ခုပါလား?
[Zawgyi] Video Game ဆိုတာ အားကစားနည်း တစ်ခုပါလား? ကျွန်တော်တို့ လက်ရှိနေထိုင်နေတဲ့ အသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုမှာ Computer နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် Console ဂိမ်းစက်နဲ့ ဖြစ်ဖြစ် Mobile ဖုန်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ် Video Game ဆော့နေခြင်းကို အကျိုးမရှိပဲ အချိန်ဖြုန်းသလို ထင်မြင်နေသူ အများအပြားရှိပါတယ်။ အဲလိုမျိုးဟာ သင့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေတက်သလို သင်ကိုယ်တိုင်ကလည်း ထိုကဲ့သို့ အမြင်မျိုးရှိနေနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း Video Game ဆိုတာ ပုံမှန်မြင်တွေ့နေကျ အားကစားနည်းမျိုးပဲဖြစ်ပြီး သူကတော့ ကာယထက်စာရင် ဉာဏကို အသုံးပြုပြီး ဆော့ရတဲ့ ကစားနည်းမျိုးပါလို့ ရှင်းပြပါရစေ။ Video Game ကို တစ်ဦးချင်းဖြစ်စေ၊ အသင်းလိုက်ဖြစ်စေ၊ ပြိုင်ပွဲအသွင် ယှဉ်ပြိုင်ကစားခြင်းကို Electronic Sports (Esports) လို့ခေါ်ပါတယ်။ Video Game …
Video Game ဆိုတာ အားကစားနည်း တစ်ခုပါလား? Read More »